MOHT MOHT – Page2– Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
March 17, 2020MOHT MOHTCovid-19 Lastest News, COVID-19 Latest News, Uncategorized
Suspension of Visa on Arrivals to Chinese Tourists Nay Pyi Taw, February2Ministry of Hotels and Tourism is carrying out the task in developing sustainable tourism and providing safe and secure and convenient travel in Myanmar. Due to the recent outbreak of COVID – 19 acute respiratory disease, which was started from Wuhan, China,...
March 13, 2020MOHT MOHTCOVID-19 Latest News
Tourism faces up to the COVID-19 challenge and public health is paramount due to the fundamental people-to-people nature of the sector. A cross-cutting economic activity unlike any other, and an integral part of the Sustainable Development agenda, tourism will playakey role in future recovery efforts. UNWTO calls on governments, international organizations and donor...
March 12, 2020MOHT MOHTNews, Travel Advisory
Travel Advisory (15) for COVID -19
Advise to Travel Agencies and Tour Companies providing services to the visitors from the Republic of Korea, Italy and Iran entering Myanmar by Air to understand and cooperate on the monitoring process of COVID-19 Nay Pyi Taw, March 12 Ministry of Hotels and Tourism has been trying its best in developing sustainable tourism in Myanmar...
February 28, 2020MOHT MOHTAnnouncements
B.A (Tourism) ဘွဲ့ရပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်(၂၀)ဦးတို့အား အကြီးတန်းစာရေးရာထူးအဆင့်တွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် စတင်ခန့်ထားခြင်း
B.A (Tourism) ဘွဲ့ရပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်(၂၀)ဦးတို့အား အကြီးတန်းစာရေးရာထူးအဆင့်တွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် စတင်ခန့်ထားခြင်း အောက်ပါ B.A (Tourism) ဘွဲ့ရပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၂၀)ဦးတို့အားအကြီးတန်းစာရေး(လစာနှုန်း ၁၉၈၀၀ဝိ -၂၀၀ဝိ – ၂၀၈၀၀ဝိ) ရာထူးအဆင့်တွင် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ(၃)ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် စတင်ခန့် ထားလိုက်သည် – စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁။ ဒေါ်အင်ကြင်းမေ ၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၈၁၃၇ ၂။ ဒေါ်သီတာအောင် ၅/ရဘန(နိုင်)၂၂၆၈၄၇ ၃။ ဦးပြည့်သူရဘထက် ၅/ကလတ(နိုင်)၁၀၉၉၂၁ ၄။ ဒေါ်နှင်းအိဝေ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၁၀၀၅၁ ၅။ ...
February 27, 2020MOHT MOHTTravel Advisory
Travel Advisory for the 2019-nCoV virus
Currently, the 2019-nCoV virus (2019 Novel Corona Virus) from Wuhan, the People’s Republic of China is spreading in some parts of the world. Ministry of Health and Sports has issued to report and act to the nearest airport and health departments as fast as possible for the free treatment if the travelers from the People’s...
February 2, 2020MOHT MOHTNews, Travel Advisory
Travel Advisory (10) for COVID -19
Postponement of tour operations for both Chinese Visitors to Myanmar and Myanmar Visitors to China Nay Pyi Taw, 2nd February The Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar is conducting tourism activities with the aim of sustainable tourism development and safe and secure traveling in Myanmar. Due to the recent outbreak of COVID-19, which is declared...
January 29, 2020MOHT MOHTAnnouncements
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ပူးတွဲဇယားပါ ပရိဘောဂပစ္စည်းများဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါ ဝင်စားသည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ပေးမည့်ရက် – ၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) (ခ ) တင်ဒါပုံစံရယူရမည့်နေရာ နှင့် တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ – တင်ဒါပုံစံများကို https://bit.ly/2S0k3PJ လည်းကောင်း၊QR Code ကို Scan ဖတ်၍ လည်းကောင်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၃)၊အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၊အုပ်ချုပ်ရေးဌာနစုတွင် လည်းကောင်း ရုံးချိန်အတွင်းရယူနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံများတင်သွင်းသည့်အခါကုမ္ပဏီ(၁)ခု လျှင်တစ်စောင်နှုန်းတင်သွင်းနိုင်ပြီးတင်ဒါပုံစံ တစ်စောင်လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁ဝဝဝဝိ/- တစ်သောင်းနှုန်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၊ (ဂ) တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက် နှင့်အချိန် – ၁၃ -၂-၂၀၂၀ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီ ၃။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၆၁၀၁၊ ၃၄၀၆၂၅၀၊ ၃၄၀၆၀၈၀ သို့...
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ပူးတွဲဇယားပါ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူလိုပါ သဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ပေးမည့်ရက် – ၃၀-၁-၂၀၂၀ရက် (ကြာသပတေးနေ့) (ခ) တင်ဒါပုံစံရယူရမည့်နေရာ နှင့် တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ – တင်ဒါပုံစံများကို https://bit.ly/2RxNUAf တွင် လည်းကောင်း၊QR Code ကို Scan ဖတ်၍ လည်းကောင်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၃)၊အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနစုတွင်ရုံးချိန်အတွင်းရယူနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံများတင်သွင်းသည့်အခါကုမ္ပဏီ(၁)ခု လျှင်တစ်စောင်နှုန်းတင်သွင်းနိုင်ပြီးတင်ဒါပုံစံ တစ်စောင်လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁ဝဝဝဝိ/- တစ်သောင်းနှုန်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဂ) တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် – ၁၃-၂-၂၀၂၀ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီ ၃။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၆၁၀၁၊ ၃၄၀၆၂၅၀၊ ၃၄၀၆၀၈၀...
January 27, 2020MOHT MOHTNews, Travel Advisory
Travel Advisory (8) for COVID – 19
Nay Pyi Taw, 27th January Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar is performing the duties and responsibilities aiming to enhance the sustainable development of Myanmar Tourism Sector by providingasafe and secure vacation to the visitors. From the time being, COVID-19 started from Wuhan, the People’s Republic of China is spreading in some countries...
January 24, 2020MOHT MOHTAnnouncements
Google Marketing ၊ Social Media Marketing ၊ Page နှင့် Post Boostingလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Google Marketing ၊ Social Media Marketing ၊ Page နှင့် Post Boosting လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ရာ ပြည်တွင်းနည်းပညာ ကုမ္ပဏီ (၄၆)မှ အဆိုပြုလွှာပုံစံများ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ ကုမ္ပဏီ (၇) ခုက အဆိုပြုလွှာများ လာရောက် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများကို ၁၉-၁၂-၂၀၁၉ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကျောက်စိမ်းခန်းမ၌ တင်ဒါကော်မတီ ဝင်များ၊ အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းသော ကုမ္ပဏီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ရှေ့တွင် တင်သွင်းထားသည့် ဈေးနှုန်းများကို ဖွင့်ဖောက်စိစစ်အတည်ပြုခြင်း ၊...